Ama-33% abantu baseMelika abangagonywanga bathi abasokuze bagonywe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Ama-33% abantu baseMelika abangagonywanga bathi abasokuze bagonywe
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Abantu base-UK banamathuba aphindwe kabini okuba bagonywe njengabantu base-US.
AmaMelika aphindwe kabini ngokungakhange afumane i-jab enye e-UK.
I-39% yabantu baseMelika abayi kugonywa kuba 'bengamthembi urhulumente'.
Urhulumente wase-US unohambo olunzulu phambili ekuqinisekiseni amaMelika ukuba agonywe.
Idatha kunye neziphumo zophando lwakutshanje malunga nokuthandabuza isitofu e-United States nase-United Kingdom zikhutshwe namhlanje, zityhila ukuba urhulumente wase-US unohambo olunzima phambili ekuqinisekiseni abemi bakhe ngokubaluleka kokugonywa.
Olu phando lwenziwa ukusukela nge-5 ka-Agasti ka-2021 ukuya ku-Agasti 17, 2021 kwaye kwenziwa malunga nama-5,000 abathathi-nxaxheba eUnited States kunye nabathathi-nxaxheba abali-1,000 XNUMX e-United Kingdom. Idatha yaqokelelwa kusetyenziswa indlela yenoveli yokuhlawula abasebenzisi be-smartphone njengabasebenzi be- "gig" ngokuthatha kwabo inxaxheba kwaye kukhokelele kwiimpendulo ezinkulu kumawaka ukuza kuthi ga ngoku ngokuza ngakumbi.
Iziphumo ziveze umahluko obalulekileyo phakathi kwabantu abangagonyelwanga e-US nase-UK kwaye babonisa amanqanaba ahlukeneyo oxhathiso kugonyo. Olu phononongo lukwabonisa ukuvuleka okunokwenzeka okunokusetyenziselwa ukweyisela abangagonywanga ukuba bagonywe.
Nazi ezinye zezona ziphumo zifanelekileyo kuphando:
Abantu baseMelika babephindwe kabini ngokungakhange bafumane idosi enye yesitofu sokugonya se-COVID-19 (45%) kunabalingane base-UK (23%).
I-33% yabantu baseMelika abangagonywanga kunye ne-23% yabemi base-UK abangagonywanga bathi ngekhe bagonywe.
Kulabo ngoku abangagonywanga, i-39% yabantu baseMelika kunye ne-33% yabathathi-nxaxheba base-UK bathi ngekhe bagonywe kuba bengamthembi urhulumente.
Kulawo angagonywanga kungoku nje, i-46% yabathathi-nxaxheba base-UK bathi bayakugonywa ukuba kukho ubungqina obungakumbi bokugonya okusebenzayo xa kuthelekiswa ne-21% kuphela yabantu baseMelika abangagonywanga.
Kuphela yi-7% yabathathi-nxaxheba abangagonywanga baseMelika abathi bebengagonywa kuba bengacingi ukuba i-COVID yayiyingozi yokwenyani, kodwa i-33% yabathathi-nxaxheba base-UK abangagonywanga badwelise oko njengezizathu zabo.
Ezi ziphumo zibonisa ukuba amagosa ezempilo oluntu e-US nase-UK ajongene nemiceli mngeni eyodwa ekuqinisekiseni ukuba abantu babo abangagonyelwanga bafumene Covid-19 isitofu sokugonya. Ngama-69% abantu base-UK abangagonywanga abazimiseleyo ukugonywa bakube befumana ulwazi oluthe kratya kuvavanyo, ukhuseleko, okanye ukusebenza (xa kuthelekiswa ne-49% yabantu baseMelika abangafumananga) indlela eya phambili yabenzi bomgaqo-nkqubo base-UK ibonakala ngokuthe gca. Abenzi bomgaqo-nkqubo base-US, kwelinye icala, kufuneka balwe neengxenye ezinkulu zabemi abathe abazukugonywa kwaye abayi kuyenza kuba bengamthembi urhulumente.